यी हुन् ग्यास्ट्रिक च्वा’ट पार्ने ६ घरेलु उपाय - Nawalpur Dainik
यी हुन् ग्यास्ट्रिक च्वा’ट पार्ने ६ घरेलु उपाय
पु’दिनाको दिनहुँ से’वनले मिल्ने छ यस्ता अचु’क फाईदा: नेपाली भा’न्सामा खासगरी अचारको रुपमा प्रयोग गरिने पु’दीना लोकप्रिय जडिबु’टी हो । यसले खाना पचाउन स’हयोग गर्नुका साथै तौल घटाउने, अरुचीबाट मुक्ति दिने, डि’प्रेसन तथा थकान घटाउने र टाउको दुखाई हटाउनेलगायतका काम गर्छ । यसका साथै पुदीना दम, स्मरणशक्ति कमजोर भएको र छालाका समस्यामा पनि उपयोगी मानिन्छ । यो श्वासको दुर्गन्ध हटाउने लोकप्रिय माउथ फ्रेसनर हो, जसलाई वैज्ञानिक भाषामा मेन्था भनिन्छ । दुई दर्जन जात र सयाैँ प्रकार हुने पुदीनालाई सयौंवर्षदेखि जडिबुटीका रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । पुदीनालाई प्रयोग गरेर टुथपेष्ट, चुईङगम, क्यान्डी, इन्हेलरजस्ता औषधिमा प्रयोग गरिन्छ । धेरैले पुदीनालाई माउथ फ्रेसनरको रुपमा मात्र चिन्छन् । तर स्वा’स्थ्यका लागि यसका थुप्रै फाइदा छन् ।
Prevनाकमा चि’ल्लो तथा काला वा सेता खि’ल आएर चि’न्तित हुनुभएको छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
Nextड’ण्डीफोरबाट सधैँका लागि छु’टकारा पाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय